आमा हजुरको ऋण त तिर्न सक्दिन होला । श्रीमतीको खल्ती तातो बनाउछु-चक्र साउद आर.सी – Bannigadhi Today
आमा हजुरको ऋण त तिर्न सक्दिन होला । श्रीमतीको खल्ती तातो बनाउछु-चक्र साउद आर.सी
धनराज साउँद २०७७ साउन १०, शनिबार १६:०३
अछाम -प्रदेश नम्बर ७ को एक एतिहासिक ठाउँ हो रामारोसन गाउपालिका । रामारोशन गाउपालिका भित्रका मतभेद बेला बेला सार्वजनिक भैरहेका हुन्छन । गाउपालिका र स्थानीय बीचका तालमेल नमिलेको कुरा स्थानीयबाट सुन्नमा आईनै रहन्छ । गाउपालिकाका भित्र बसेर स्थानीय जनताका जन गुनासाहरु बटुल्ने हो भने पनि गाउपालिका प्रति सकारात्मक भने देखिदैनन । गाउपालिका भित्र भएका हरेक क्रियाकलाप प्रति त्यहाका स्थानीय रुष्ट भएका छन् । यसै सन्दर्भमा व्यंग्यत्मक तरिकाले पत्रकार तथा गायक चक्र साउद आर.सीले आफ्नै फेसबुक सन्जालमा स्टाटस लेखेका छन् ।
”आमा कुखुरा अलि मेहनत गरेर पाल्नुहोला, (ठ्यौका) रक्सि कालापानीबाट रक्सीका पोका ल्याउला । योजनाको काममा हात हाल्छु । कुखुरा पार्टी र (ठ्यौका) रक्सि पार्टी गरेर मैले जे भने त्यही मान्छे पल्लाघरे काकको छोरालाई उपभोक्ता समितीको अध्यक्ष बनाउछु अनि तल्लाघरे साईलीलाई कोषाध्यक्ष बनाउछु । काम नपाएर बसेका छन् स्थानीय जनतालाई सकेसम्म काममा दलाउछु । दिनको काम गराए बाफत जनशक्तिले पाउने ६९० हो म १९० मै मिलाउछु । जनता भोकै मर्दैनन बारीमा खेति छदै छ भकारीमा अन्न छदै छ । म अर्को काममा जान्छु । फोन छदै छ म बुझ्दै गर्छु जनताले काम गर्दै गर्छन । दशैँ आउँन लाग्यो १-२ ओटा योजना पास गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गराउछु । आमा हजुरको ऋण त तिर्न सक्दिन होला । श्रीमतीको खल्ती तातो बनाउछु । अलिदिन साथीभाईसँग बसेर कुखुरा र (ठ्यौका) रक्सि पार्टीसम्म त गर्छुहोला ।
रामारोसन गाउपालिका केहि व्यक्तिका कारण बेला-बेला बदनाम हुदै आएको छ । रामारोसन गाउपालिकामा भएका केहि बिकास योजना बाउको वृता झैँ भएका छन् । स्थानीयले बोल्न पाउनु हुदैन अरे ! स्थानीयले, एक सचेत नागरिकले आवाज उठाउन नपाउने रे । योजना बनाउदा,योजना कार्यान्यन हुदाँसम्म उनीहरुकै मातहत बेगर चलन नहुने ! काम नगराएका भने छैन गराएका छन् तर सस्तो काम चलाउ पकेट भराउ भएका जलन्त घटना आखा आगाडी छन् । बेलिबिस्तार लगाउनु पर्दैन होला । यदि जनताका ;लागि आएका ल्याईएका योजना हुन् भने किन धेरै समय टिकाउ हुदैनन् त् ? लाखौका योजनाहरु निर्माण भएका महिना दिन नपुग्दै फुटेर कामै नलाग्ने हुन्छन् । भत्केर जान्छन । काठ माटो ढुङ्गाले बनाएका संरचना त् २०/३० वर्षसम्म टिकेका छन् ।
प्रश्न यत्ती हो कि योजना सम्पन्न भयो भनेर रिपोर्ट बुझाउने प्राबिधिकका आँखा के ले छेक्यो, योजना अनुगमन गर्ने गाउँपालीकाको निकाय कहाँ कसरी भुल्यो??? यो रोग रामारोसन गाउपालिका भित्र मात्रै होला कि अन्त पनि होला बुझ्न मन छ । स्थानीय नागरिकले बोल्न नपाउनु गुनासो गर्न नै नपाउनु ? म नियाल्दै छु । गर्न केहि नसके पनि नजिकबाट नियाल्न पाउने अधिकार त कानुनमा छ होला नि ! एउटा सचेत नागरिकको भूमीका निभाउन कसैले हतकन्डा प्रयोग गर्छ भने हामी पनि निरीह भएर बस्ने दिन सकीय महोदय !!
आफ्नो मातृभूमीबाट कर्मको लागि टाढा भएपनी आफ्नो कर्तव्य भुलेको छैन, जिम्मेवार नागरिक हुनुको अर्थ भुलेको छैन ! जनता नेता बनाउने कारखाना मात्र होईनन्, खबरदार जनता सचेत नागरिक पनि हो र जनताको इच्छा आकाँक्षा र दिगो बिकास को फर्मुला अपनाउँदैनौ भने कसैको अर्थ छैन !!